डिस मिडिया नेटवर्कको डिसहोम क्रेडिट सर्भिस अब ५ दिन सम्म पाइने ~ Banking Khabar
बैंकिङ खबर । आफ्ना ग्राहकहरुको लागि उत्कृष्ट सेवाहरु प्रवाह गर्न बचनबद्ध डिस मिडिया नेटवर्क लि.ले आफ्ना ग्राहकहरुलाई विभिन्न सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । यस अन्तर्गत डिस होमले आफ्ना ग्राहकहरुलाई सदस्यता शुल्क समाप्त भइसके पछि पनि ३ दिन सम्म थप म्याद दिदै आएकोमा अब उक्त सेवाको म्याद थप गरि ५ दिन पुर्याएको छ । यो सेवाका साथ ग्राहकहरुले एकपटक किनेको नियमित सेवाको अवधि समाप्त भएपछि थप ५ दिनको क्रेडिट सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसरी नियमित सेवाको अवधि समाप्त भएपछि थप गरिएको क्रेडिट अवधि ग्राहकहरुले आफ्नो सेवा नवीकरण गर्दा सोही नवीकरण अवधिमा मिलान गरिनेछ । यो प्रक्रिया झंझट रहित स्वचालित सेल्फ–सर्भिस मोडल प्रणालीमार्फत् संचालित हुनेछ र यो सेवा सुविधा प्राप्त गर्नका लागि ग्राहकले कुनै प्रकारका अतिरिक्त व्ययभार व्यहोर्नु पर्ने छैन ।
यो सर्भिस सुचारु गर्नुको उद्देश्य ग्राहकहरुलाई व्यवधान रहित सेवा उपलब्ध गराउनु हो । यो सेवा ग्राहकहरुले आफ्नो सेवा रिचार्ज गर्नलाई ग्रेस(सुविधा) अवधिको रुपमा उपलब्ध गराइनेछ । यस प्रकारको सेवाबाट विशेष गरेर ग्रामीण भेगका ग्राहकहरु, जहाँ तत्काल रिचार्ज गर्न समस्याहुन सक्छ, उनीहरु वास्तविक रुपमा लाभान्वीत हुनेछन् । यो सेवाको कारण अचानक सेवा टुट्न गएको अवस्थामा तत्काल सेवा नवीकरण सुविधा उपलब्ध हुने हुँदा ग्राहकहरुको टेलिभिजन हेर्ने अनुभवलाई थप विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
डिसहोम क्रेडिट सर्भिस सेल्फ–सर्भिस मोडल सेवा हो जुन ग्राहकहरुको सुगमता अनुरुप डिसहोम ग्राहक सेवा केन्द्र मार्फत् वा डिसहोम मोबाइलएपमा दर्ता भएर, मोबाइल एसएमएस मार्फत् सुचारु गर्न सकिन्छ ।
डिसहोम सबैभन्दा ठूलो डिटिएच सेवा प्रदायक संस्था हो । देशभर छरिएको बृहत्तर सर्भिस सञ्जालका साथ डिसहोमले विगत १० वर्षभन्दा अघिदेखि २० लाखभन्दा धेरै ग्राहकहरु माझ आफ्नो विश्वस्तरीय सेवाप्रदानगर्दै आइरहेको छ । हाल दैनिक रुपमा ५८०० भन्दा ज्यादा ग्राहकहरुले यो क्रेडिट सेवाको उपभोग गरिरहेका छन् ।
राष्ट्र बैंकको कार्यविधि : २० प्रतिशत नाफा गर्ने उद्योग/व्यबसायले पुनरकर्जा नपाउने
हाल बैंकिङ कारोबारमा उल्लेखित सेवाहरु निशुल्क छन् !
एटीएम सुविधा र डिजिटल कारोवार गर्दा बैंकले पैसा त काटेको छैन ?
कृषि, घरेलु तथा मझौला उद्योगले ५ प्रतिशत व्याजमै कर्जा पाउने
विकास बैंकको संख्या घट्दै, देव: विकास बैंक – कुमारी बैंकमा छिट्टै गाभिने
एसियाली विकास बैंकले नेपाललाई ३० अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने
थप २२६ जनामा कोरोना संक्रमण देखिए सँगै संक्रमितको संख्या १ हजार ७ सय ९८ पुग्यो
बजेट यथार्थपरक, कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण